Indlela engcono futhi elula yokulanda amavidiyo we-YouTube nomculo ivela kuYTzip.com lapho ungenza khona ukulanda ividiyo ye-YouTube ngendlela elula kakhulu.
I-YouTube.com yisayithi elidume kakhulu lamavidiyo, ama-movie, izingoma nezinye izinto. Kepha ku-YouTube awukwazi ukulanda ividiyo ye-YouTube.
I-YTzip.com ikunikeza ukulanda noma iyiphi ividiyo ye-YouTube Mahhala. Ngakho-ke, qhubeka nokulanda ividiyo ye-YouTube.
Ungalanda kanjani ividiyo yeYouTube ku-YTzip.com?
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungalanda kanjani ifomu lamavidiyo we-YouTube ytzip.com mahhala ngokuphelele?
Isinyathelo 1: - Kopisha isixhumanisi sevidiyo yakho ye-YouTube ofuna ukuyilanda bese uya ku-YTzip.com esidlule isixhumanisi kubha bese uchofoza inkinobho yokulanda. bese uqhubeka ngokulanda ividiyo ye-YouTube.
Isinyathelo 2: - Khetha ifomethi oyithandayo (MP4 noma i-MP3 namanye amafomethi)
Isinyathelo 3: - Ngemuva kokukhetha kuzoqala ukulanda ividiyo. Manje ungajabulela ukulanda ividiyo yakho ye-YouTube.
Ungakwenza kanjani ukulanda ividiyo ye-YouTube ku-MP3 noma kwi-MP4 ku-YTzip.com?
Ukulanda ividiyo ye-YouTube ngamafomethi we-MP3 noma ama-MP4 udinga nje ukusebenzisa ukukhethwa kwamafomethi ngaphambi kokuthi ucubungule ukulanda kuSayithi le-YTzip.com
Ungakwenza kanjani ukulanda ividiyo ye-YouTube kuselula yakho kusuka ku-YTzip.com?
Isinyathelo 1: - Vula ividiyo ye-YouTube efonini yakho ukuthi iyiphi ividiyo ofuna ukuyilanda.
Isinyathelo 2: - Bese uchofoza inkinobho "yabelana" kuvidiyo. izoba ngaphansi kwevidiyo bese ngemuva kwalokho chofoza ku- "copy link" bese uqhubekisela ukulanda ividiyo ye-YouTube.
Isinyathelo 3: - Vula i-YTzip.com bese udlulisa isixhumanisi kubha bese uchofoza inkinobho ethi "Landa".
Isinyathelo 4: - Khetha ifomethi yefayili ofuna ukuyisebenzisa bese uqhafaza kulanda. Shesha ukulanda ividiyo yakho ye-YouTube kushiwo manje uma isiqedile jabulela ividiyo yakho.
Kungani kufanele ukhethe i-YTzip.com yokulanda ividiyo ye-YouTube?
Iwebhusayithi ehamba phambili etholakala kwi-inthanethi yokulanda ividiyo ye-YouTube yi-YTzip.com inikeza amafomethi amahle kakhulu atholakalayo ukuze ividiyo ilandwe futhi ikhwalithi yevidiyo futhi ibamba izithombe nomsindo muhle kakhulu. Ngakho-ke, ungasebenzisa i-YTzip.com ukulanda ividiyo ye-YouTube.
Ungakwenza kanjani ukulanda ividiyo ye-YouTube kwikhompyutha yakho kusuka ku-YTzip.com?
Isinyathelo 1: - Vula ividiyo ye-YouTube kwikhompyutha yakho ukuthi iyiphi ividiyo ofuna ukuyilanda.
Isinyathelo 2: - Bese uchofoza inkinobho "yabelana" kuvidiyo. izoba ngaphansi kwevidiyo bese ngemuva kwalokho uchofoze ku- "copy link" NOMA ungakopisha isixhumanisi ngqo kubha yekheli. bese uqhubeka ngokulanda ividiyo ye-YouTube.
Wake wezwa ngeYTzip.com?
I-YTzip.com kulula kakhulu ukuyisebenzisa kusayithi ye-pc yakho futhi iyahambisana neselula ekulandweni kwevidiyo ye-YouTube. Inketho engcono kakhulu etholakala ku-inthanethi yokulanda ividiyo ye-YouTube yi-YTzip.com.
Ungakwenza kanjani ukulanda ividiyo ye-YouTube kuthebhulethi yakho kusuka ku-YTzip.com?
Isinyathelo 1: - Vula ividiyo ye-YouTube kuthebhulethi yakho ukuthi iyiphi ividiyo ofuna ukuyilanda.
Ukulanda ividiyo ye-YouTube ngokusebenzisa i-YTzip.com
Isinyathelo 1: - Vula iwebhusayithi ethi YTzip.com YouTube yokulanda ividiyo bese ufaka i-URL yevidiyo ye-YouTube kunkambu yebhokisi, phezulu ekhasini ku-YTzip.com.
Isinyathelo 2: - Bese uchofoza inkinobho ethi "Landa".
Isinyathelo 3: - Khetha ifomethi yefayili ofuna ukuyisebenzisa bese uqhafaza kulanda. Shesha ukulanda ividiyo yakho ye-YouTube kushiwo manje uma isiqedile jabulela ividiyo yakho.
Isinyathelo 4: - YTzip.com kulula kakhulu ukuzulazula esizeni sokulanda ividiyo ye-YouTube.
Ungayenza kanjani i-YouTube video download kumafomethi we-mp3 womculo kuphela.
Isinyathelo 3: - Khetha ifomethi yefayela mp3 bese uchofoza ukulanda. Shesha ukulanda ividiyo yakho ye-YouTube kushiwo manje uma usuqedile jabulela umculo wakho.
Ngingawalanda kanjani amavidiyo we-YouTube namavidiyo amafushane?
Isinyathelo 1: - Vula ividiyo ye-YouTube noma ufushanise amavidiyo kusuka efonini noma kukhompyutha yakho ukuthi iyiphi ividiyo ofuna ukuyilanda.
Ungawalanda kanjani amavidiyo ku-YouTube?
Isinyathelo 1: - Vula ividiyo ye-YouTube noma amavidiyo amafushane avela ku-ifoni noma ikhompyutha yakho ukuthi iyiphi ividiyo ofuna ukuyilanda.
Ngingawalanda kanjani amavidiyo we-YouTube ngqo?
Ubani ongalanda amavidiyo we-YouTube?
Noma ngubani angalanda amavidiyo e-YouTube iwebhusayithi ehamba phambili lapho ungalanda khona amavidiyo we-YouTube yi-https: //ytzip.com/ yokulanda ividiyo ye-YouTube le webhusayithi ingenye yewebhusayithi ehamba phambili ukulanda ividiyo ye-YouTube, unezinketho zokulanda ngekhwalithi ehlukile , ungalanda ngaphandle komsindo, ungalanda umsindo kuphela, noma ungalanda ividiyo ngomsindo kanye nevidiyo futhi nekhwalithi yevidiyo nomsindo nayo ihle kakhulu. ngakho-ke, qhubeka ulande ividiyo ye-YouTube.
Yikuphi ukulanda okungcono kakhulu kwe-YouTube?
https://ytzip.com/ le webhusayithi ingenye yewebhusayithi engcono kakhulu yokulanda ividiyo ye-YouTube, unezinketho zokulanda ngekhwalithi ehlukile, ungalanda ngaphandle komsindo wokulanda ividiyo ye-YouTube, ungalanda umsindo kuphela, noma ungakwazi landa ividiyo ngomsindo kanye nevidiyo futhi ikhwalithi yevidiyo nomsindo nayo inhle kakhulu. ngakho-ke, qhubeka ulande ividiyo ye-YouTube.
ungalanda kanjani amavidiyo kuwe ithubhu?
Iwebhusayithi ehamba phambili lapho ungalanda khona amavidiyo we-YouTube yi-https: //ytzip.com/ le webhusayithi ingenye yewebhusayithi ehamba phambili ukulanda ividiyo ye-YouTube, unezinketho zokulanda ngekhwalithi ehlukile yokulanda ividiyo ye-YouTube, ongayilanda ngaphandle umsindo, ungalanda umsindo kuphela, noma ungalanda ividiyo ngomsindo nangamavidiyo futhi ikhwalithi yevidiyo nomsindo nayo inhle kakhulu. ngakho-ke, qhubeka ulande ividiyo ye-YouTube.
Ungawalanda kanjani amavidiyo we-YouTube
Iya ku-YTzip.com bese udlula i-URL yokulanda ividiyo ye-YouTube ofuna ukuyilanda futhi uyidlulise kunkinobho yokulanda izoqala ukulanda. ngakho-ke, qhubeka ulande ividiyo ye-YouTube.
Yiliphi isayithi elingcono kakhulu ekulandeni amavidiyo we-YouTube?
I-YTzip.com le webhusayithi ingenye yamawebhusayithi angcono kakhulu wokulanda ividiyo ye-YouTube, unezinketho zokulanda ngekhwalithi ehlukile, ungalanda ngaphandle komsindo wokulanda ividiyo ye-YouTube, ungalanda umsindo kuphela, noma ungalanda ividiyo ngawo womabili okulalelwayo nevidiyo kanye nekhwalithi yevidiyo nomsindo nayo inhle kakhulu ngokulanda ividiyo ye-YouTube. ngakho-ke, qhubeka ulande ividiyo ye-YouTube.
Ngingalanda kanjani amavidiyo we-YouTube 2020 noma 2021?
Ungakwazi ukulanda amavidiyo we-YouTube 2020 noma 2021 Vula ividiyo ye-YouTube noma short videos kusuka efonini noma kukhompyutha yakho ukuthi iyiphi ividiyo ofuna ukuyilanda bese uqhafaza inkinobho ethi "share" kuvidiyo. izoba ngaphansi kwevidiyo bese ngemuva kwalokho chofoza ku- "copy link" bese uqhubekisela ukulanda ividiyo ye-YouTube. Bese Vula i-YTzip.com bese udlulisa isixhumanisi kubha bese uchofoza inkinobho ethi "Landa". Ekugcineni Khetha ifomethi yefayela ofuna ukuyisebenzisa bese uchofoza ukulanda. Shesha ukulanda ividiyo yakho ye-YouTube kushiwo manje uma isiqedile jabulela ividiyo yakho.
Ukulanda ividiyo ye-YouTube, Vula ividiyo ye-YouTube noma short videos from your phone or computer for YouTube video download which video you want to download then Bese uqhafaza inkinobho ethi "share" kuvidiyo. izoba ngaphansi kwevidiyo bese ngemuva kwalokho chofoza ku- "copy link" bese uqhubekisela ukulanda ividiyo ye-YouTube. Bese Vula i-YTzip.com bese udlulisa isixhumanisi kubha bese uchofoza inkinobho ethi "Landa". Ekugcineni Khetha ifomethi yefayela ofuna ukuyisebenzisa bese uchofoza ukulanda. Shesha ukulanda ividiyo yakho ye-YouTube kushiwo manje uma isiqedile jabulela ividiyo yakho.